'बाबु कान्छा' को रोमान्टिक गीत सार्वजनिक, यस्तो छ सलोन र करिश्माको ‘पहिलो प्रेम’ (भिडियो) — Harpraharnews.com
‘बाबु कान्छा’ को रोमान्टिक गीत सार्वजनिक, यस्तो छ सलोन र करिश्माको ‘पहिलो प्रेम’ (भिडियो)
२८ असार २०७५, बिहीबार July 12, 2018 हरप्रहर न्युज
अभिनेता सलोन बस्नेत र अभिनेत्री करिश्मा श्रेष्ठ प्रेममा रहेको कुरा अब नौलो रहेन । पहिलो पटक फिल्म ‘लभ सब’ मा सँगै काम गरेका यी दुई अभिनीत नयाँ फिल्म ‘बाबु कान्छा’ यही असार २९ गतेबाट प्रदर्शनमा आउँदैछ ।
यो फिल्ममा समावेश ‘मेरो पहिलो प्रेम’ बोलको रोमान्टिक गीत सार्वजनिक भएको छ । गीतमा सलोन र करिश्मा एकअर्कालाई आफ्नो पहिलो प्रेम भन्दै हिमालको काखमा रमाइरहेका छन् । गीतले बोले झैं के यी दुई एकअर्काको पहिलो प्रेम हुन् ? यसको जवाफ त उनीहरु नै जान्दछन् ।
कमल खत्री र सुधा रत्नको स्वर रहेको गीतमा शुशील पंगेनीको शब्द र टंक बुढाथोकीको संगीत सुन्न सकिन्छ । रामजी लामिछानेको कोरियोग्राफी रहेको गीतको भिडियोमा सलोन र करिश्मा रोमान्टिक अवतारमा प्रस्तुत छन् ।
शोभित बस्नेतको निर्माण तथा निर्देशन रहेको ‘बाबु कान्छा’ मा नीर शाह, सरोज खनाल, राजाराम पौडेल, लय संगौला, ऋतिक शाही, सम्राट सापकोटा, मञ्जु पौडेललगायतको पनि अभिनय रहेको छ । यो फिल्मबाट अश्लिन ज्ञवाली र ज्योत्सना महर्जनले डेब्यू गर्दैछन् ।
सञ्चारकर्मी रबि अधिकारी कार्यकारी निर्माता रहेको ‘बाबु कान्छा’ मा सन्तोष राज भण्डारी र सुरज घिमिरे सह-निर्माताको रुपमा रहेका छन् । बाबु श्रेष्ठ र कृष्ण श्रेष्ठको छायांकन रहेको फिल्ममा रामजी लामिछाने र दिपेन्द्र तिमिल्सेनाको कोरियोग्राफी रहेको छ ।
उक्त फिल्ममा अष्ट महर्जनको द्वन्द, गौतम राज खड्काको सम्पादन, टंक बुढाथोकीको संगीत रहेको छ भने ओम सुनारले ‘कर्णवीर’ को ‘चन्द्रमा झैँ राम्री छौ’ गीतलाई रिमिक्स गरेका छन् ।
नेपालमा लिभिङ्ग टुगेदरः बरदान हो कि अभिशाप ?
दिशा पटानी बनिन् बलिउडकी ‘मोस्ट डिमान्डिङ’अभिनेत्री, लत्याइन् अक्षय कुमारको फिल्म